Lasa mahery setra kokoa ny hetsi-panoherana ao Hong Kong satria tsy hita ny rariny · Global Voices teny Malagasy
Fa maninona no lasa maherisetra ny fihetsiketsehana ao Hong Kong?
Voadika ny 05 Novambra 2019 8:29 GMT
Nirohotan'ny mpanao fihetsiketsehana ny garan'i Yuen Long tamin'ny 21 jolay 2019. Pikan'efijery
Mpanandra-teny amin'ny zon'olombelona ao Hong Kong, mpikambana exco tao amin'ny Amnesty International ary mpampivory taloha ny Mandan'ny Sehatry ny Zon'olombelona i Johnson Yeung Ching-yin, mpanoratra amin'ity lahatsoratra ity. Navoakan'i Hong Kong Free Press ny 26 Oktobra 2019 ary naverina navoaka tato amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny famoahana votoaty sy araka ny faneken'ny mpanoratra.
Te-hilaza tantara momba ahy sy herisetra aho.
Tamin'ny 21 Jolay, nitarika ny vatako nody aho tamin'ny misasakalina taorian'ny fihetsiketsehana naharitra tontolo andro. Rendremana ny sakaizako, izaho kosa nanendry midina sy miakatra ny efijerin'ny findaiko tao anaty aizina. Heniky ny lahatsary ahitana ireo andian'olona mitondra tehimby sy mikapoka ireo mpandalo tsy misy anavahana ao Yueng Long [mg] ny faham-baovaoko.
Nanamafy ireo jiolahimboto nikapoka olona ireo, taty aoriana, fa avy amin'ny triady sy manana fifandraisana amin'ny mpanao lalàna pro-Beijing, nefa dia nijoro teo akaiky sy nijery fotsiny ny polisy. Nambenan'ny polisy misahana ny rotaka manokana ny sasany ka nitondra azy ireo any amin'ny toerana azo antoka.
Zara raha natory aho tamin'iny alina iny; ny adrenalinina tao amin'ny vatako no mahatonga ahy hifoha. Tazonin'ny saiko hanao fanazarana amin'ny fomba hiarovako ny mpandeha aho raha tao anaty fiaran-dalamby.
Ny ampitson'io, nisy horohoro nameno an'i Hong Kong. Nikatona aloha be ny toeram-pivarotana sy ny tsenambarotra, fitsinjovana anaty tahotra amin'izay mety ho fanafihana iray hafa. Nandritra ny sakafo antoandro, nisy mpiara-miasa amiko iray nanasa ahy hanao fihetsiketsehana any amin'ny faritra misy ireo jiolahimboto. Nanaiky avy hatrany aho ary nanapitra ny sakafoko tao anatin'ny dimy minitra, ary naka fantsona PVC iray ary nataoko tao anaty kitapoko.
Vonona ny hiditra gidragidra aho. Tsy vitan'ny hoe vonona hiady aho — mitady ihany koa ny hifanehatra amin'ireo jiolahimboto mba hahafahako mametraka ny rariny amin'izy ireo.
Tamin'ny farany anefa, tsy nisy jiolahimboto nifanehatra tamiko tamin'io andro io, fa mbola tadidiko hatrany ny fiontanako hampiasa herisetra.
Miha-mahery setra ve ny fihetsiketsehana ao Hong Kong? Azo antoka. Ary na dia tsy mahery setra aza ny fihetsiketsehana amin'ny ankapobeny, dia lasa mihabetsaka kokoa ny fampiasana hery anoherana ny polisy, ny famotehana zavatr'olona ary ny fanaovana andrimaso. Ary tsapako tsara ny antony nahatonga izany: satria tsy hita tao anatin'izay efa-bolana izay ny rariny.
Manitsakitsaka hatrany ny zo ny polisy ary mandratra olona. Mihoatra ny 1 000 ny olona naratra; nisy mpanao gazety iray heverina ho tsy mahita intsony ny ila-masony; tapaka ny sandrin'ny lehilahy iray nandritra ny fisamborana azy; ny sasany kosa nilaza fa nohararaotin'ny mpampihatra lalàna ara-nofo.
Afisim-panoherana iray tao amin'ny Nosy Hong Kong tamin'ny 6 Oktobra Saripika: May James / HKFP.
Mpanangom-baovao iray no naiditra hopitaly taorian'ny nanatsatohan‘ny jiolahimboto iray antsy azy; tanora iray no mety handany ny andro sisa iainany eny amin'ny seza misy kodiarana satria notapahin'ireo andian-jiolahimboto voakarama ny hozabe amin'ny vodi-tongony. Ary andro vitsy lasa izay, zazavavy iray no naratran'ny mpamily fiarakaretsaka iray nanao fanahy iniana nanitsy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana.
Ho voatondra eny amin'ny fitsarana ve ireo jiolahimboto ireo? Misalasala ny amin'izany aho noho ny fahitako ny polisy miara-miasa amin'izy ireo matetika.
Ankehitriny, 80 isanjaton'ny mponina no mitaky famotorana mahaleotena momba ny herisetra ataon'ny polisy, araka ny fitsapankevitra Ming Pao, ary namaly ny governemanta tamin'ny alàlan'ny fanononana fandraisana fahefana noho ny hamehana sy nandrara ny olona tsy hanao sarontava.
Ary tadidio ao an-tsaina, tsy nifidy ny governemanta izahay. Namotika tanteraka ny fanamarinana sy ny tsindrilenta mampisoroka an'i Hong KOng tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny tanàna tsirefesimandidy ny fahefana noraisina noho ny hamehana. Nakatony tsirairay ireo mety fantsona mandala filaminana hamahana ny krizy politika.
Tsy hipetra-potsiny eto hanaiky hovonoina ny vahoaka. Hifahatra ry zareo. Tadidio ny fomba namariparitan'i Hobbes ny toetran'ny natiora? Tsy misy governemanta, tsy misy lalàna, tsy misy fahefana iraisana afaka hisakana. Efa fandre ve? Izany i Hong Kong amin'izao fotoana: eken'ny vahoaka ny ampihimamban'ny fanjakana hanao herisetra satria atokisan'izy ireo fa hampiasa herisetra araka ny lalàna ny fanjakana—saingy nataon'ny governemanta ho lavenona izany dinam-piarahamonina izany.
Imbetsaka aho no mahatsapa faniriana hanipy baomba solika. Efa nalaiko sary tao an-dohako ny fomba handraisana basy poleta avy amin'ny polisy. Ary fantatrao ve izay manakana ahy tsy hanao izany? Izany satria misolo tena ny fikambanako aho, izay nanolo-tena ho amin'ny tsy fanaovana herisetra, ary satria mino aho fa manana fahombiazana tsara kokoa ny hetsika tsy mampiasa herisetra.
Ny tena zava-dehibe dia efa nandresy lahatra ny tenako aho fa ho hita ihany ny rariny rehefa any aoriana any. Tsy midika izany fa afaka mieritreritra toa ahy ny olon-drehetra.
Mahatsiaro ho tsy manam-paharetana aho. Ary misy olona mino fa hanihany izany mitady ny rariny ao anaty rafitra izany. Ho azy ireo, fomba iray hikarohana ny rariny ny fanakorontanana fivarotana iray fananan'ny mpiara-dia amin'ny governemanta, na fikapohana mpomba ny governemanta mitady hanafika ny hafa.
Tsy tokony hozakaina ny herisetra—tokony hajanona izany ka manomboka amin'ny herisetra ataon'ny fanjakana. Ao anatin'ny hamehana i Hong Kong, ary mihena any amin'ny tsy hita maso ny lalàna izay nohajain'ny olom-pireneny taloha.
Tsy hangataka aminao aho hizaka herisetra, mangataka anao aho hahatakatra (ny anton’)izany. Nilaza i Martin Luther King indray mandeha hoe: “Ny rotaka no fitenin'ny tsy heno.” Raha tsy fantatra izay niaviany dia tsy mandre izay lazain'ny olona ianao. Izany no hamantarana ny rariny, ary tokony averina izany izao.